INI ndiri mudzimai ane makore 29 nemwana mumwe chete uye ndinotsvagawo murume ane rudo anoda zvekuroora Vanoda ndibatei pa0771 065 956.	Thursday, 23 May 2013 07:53	INI ndiri mudzimai ane makore 29 nemwana mumwe chete uye ndinotsvagawo murume ane rudo anoda zvekuroora Vanoda ndibatei pa0771 065 956.****Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 35 uye ndinotsvaga shamwarirume yakatendeka ine makore 40 kusvika 50. SMS pa0733 834 256 kana kufona, ndinozvishandira.****Ini ndiri mukadzi ane makore 27, ndine mwana mumwe chete uye ndiri kutsvagawo mukomana anoda nezvangu anotya Mwari ari pachokwadi. Ndinoda ane makore 29 kusvika 34 asi matsotsi kwete. Ndiri muHarare, nhare dzangu 0772 447 265.****Ndiri mudzimai ane makore 29 okuberekwa akavimbika, anovenga mabasa erima, zvakare handina mwana. Ndiri kutsvagawo murume wekumisa naye musha akatendeka anotya Mwari ane mwana mumwe kana vaviri. Ndibatei pa0772 554 122.****Makadini veTishamwaridzane? Pane vaimbofona pa0715 433 021 chiregerai ndakazowana penpal.****Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 22 ekuberekwa uye ndine mwana mumwe ndinotsvagawo murume ane makore 24 kusvika 32 anoshanda asinganwe doro kana kuputa fodya. Ndibatei pa0737 361 478.****Ini ndiri mukomana ane makore 28 uye ndinoda mudzimai akavimbika akazvipira pakuroorwa kunyangwe ane mwana asi ane makore 23-26. Vanoda ndibatei pa0778 764 275.****Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 19 anoenda kuchechi kumasowe kwete vane varume vavo. Nhare dzangu 0778 866 305, ndatenda.****Ndiri murume ane makore 37, ndiri kuda mukadzi kana musikana ane makore 18 kusvika 35 ari negative akanaka mutsvuku, akasimba. Nhare dzangu 0733 794 354.****Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-22 anoda zvekuroorwa anonamata. Ndibatei pa0778 128 704 ndinotenda.****Ndiri mudzimai ane makore 42 nevana vaviri uye ndinotsvaga murume ane makore 40 kusvika 50 akatsvinda asina mudzimai. Nhare dzangu 0736 082 303.****Ndiri mukadzi ane makore 30, handina chirwere uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi asina chirwerewo ande makore 35 kusvika 40. Ndine vana vaviri, nhare dzangu idzi 0738 815 330.****Ndiri murume ane makore 35 uye ndiri kutsvagawo mudzimai ane mwana mumwe kana vaviri anogara muHarare kana Chitungwiza. Makore ake ngaaperere pa40, nhare dzangu 0774 136 640.****Ndiri murume ane makore 26 ndiri kutsvagawo musikana akavimbika anotya Mwari ane makore 20 kusvika 26. Nhare dzangu 0714 527 744, ndinotenda nechirongwa chenyu.****Ini ndiri murume ane ane makore 30 nokudaro ndinodawo mudzimai ane makore 20 kusvika 28 ane mwana mumwe kana asina, mukobvu. Anondibata pa0776 193 153.****Ndiri murume ane makore 26 nemwana 1 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 21 kusvika 24 anoshanda ava kuda zvemusha. Ndinoshanda muhurumende, nhamba dzangu 0713 957 885.****Kave kechitatu ndichinyorera musingandishambadzewo. Angu makore 53 nevatatu ndinotsvagawo mudzimai anoda zveimba ari pachokwadi ane makore 35 zvichidzika anoshanda. Fonai pa:0733 955 216.****Ini ndiri mukomana ane makore 29 uye ndinotsvaga musikana ane makore 21 kusvika 28 ari pachokwadi. Anoda zvemba asingashoreke ndibatei pa0772 835 474 kana kutumira sms.****Makadini veTishamwaridzane?Ndiri murume ane makore makumi matatu nemana uye ndinotsvaga shamwarikadzi ine makore 20 kusvika 30 ane vana kana mwana nokuti ndine vangu vaviri. Anoda ngaaridze pa0777 601 172, anoda zvemusha nekuti pakurarama ndine zvandinoita.****Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 21 okuberekwa uye ndinotsvagawo mukadzi asina HIV. Ndine mwana mumwe, amai vacho ndakavabata nechikomba. Nhamba dzangu 0736 539 365.****Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinoshanda uye ndinotsvagawo musikana wekuwana ane makore 18-23. Nhare dzangu idzi 0779 609 892.****Ndiri mukomana ane makore 22 anotyawo Mwari uye ndinotsvakawo shamwarisikana ine makore 19 ngaave asinganyadzise kuratidzawo vabereki vangu achityawo Mwari.Anoda nezvangu nhare dzangu idzi 0715 761 891 tokurukura.****Ndiri amai vane makore 40 nemwana mumwe chete. Ndakasiyana nemume mugore ra2006 uye ndiri positive. Ndinotsvaga murume ane status inenge yangu ane makore 45 zvichienda mberi anonamata. Ini ndiri mudzimai weruwadzano. Ndibatei kana kutumira sms panhamba dzinoti 0776 818 379. Ndinotenda. ****Makadii henyu veKwayedza? Ini ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 25 zvichidzika ndinozvishandira. Anoda ngaafone pa0772 391 629.****Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana mumwe chete uye ndinotsvaka murume wokuvaka naye musha asi handidi ari pachirongwa. Nhare dzangu idzi 0772 505 620. ****Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndinotsvaka musikana anoda zveimba ane makore 18 kusvika 23. Ndinoshanda muhurumende, anoda ngaandibate pa0735 448 394 chero nguva.****Ndiri mukomana ane makore 21 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 20. Nhare dzangu idzi 0712 585 900. ****Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana vaviri uye ndinotsvagawo murume ane vanawo ane makore 35 kusvika 47. Ndinotya Mwari, vanoda ndibatei pa0775 139 914. Ndiri negative.****Ndapota ndibatsireiwo. Ndiri murume ane makore 40 nevana 3 uye ndiri kutsvagawo musikana kana mukadzi anoda kuroorwa munguva pfupi iri kutevera. Ari pachokwadi ngaatumire sms kana kufona pa0736 578 568. ****Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 2 uye ndinotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 45 anofarira kuenda kuchechi. Vanoda ndibatei pa0774 470 132.****Ndiri murume ane makore 35 uye ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora akanaka ane makore 20-23. Vanoda kutamba nemacall kwete, nhare dzangu idzi 0774 529 553.****Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vaviri uye ndinotsvagawo murume ane makore 42-50 anoshanda, akarongeka. Asinganwe doro, ari negative anoda zvekuroora asi kwete varume vevanhu. Kubhipa nemacall me back kwete. Anoda kuvaka musha ngaandibate pa0736 196 366. ****Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana mumwe uye ndinotsvagawo murume ane makore 25 zvichikwira ari positive ane rudo nemwana wangu. Ndinoda anoshanda, anogeza asi macall me back kwete. Ndibatei pa0715 794 450.****Ini ndinonzi Sheron, ndine makore 26 uye ndinotsvagawo murume ane makore makore 28 kusvika 32 ane mwana mumwe. Handishandi, ndatenda zvangu. Nhare dzangu idzi 0738 606 698.****Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndiri kutsvaga murume ane makore 23-27 asina mwana anoshanda kana kusashanda ari HIV negative. Ndibatei pa0779 827 938.****Ndiri mukomana ane makore 30 uye ndinodawo musikana kana mukadzi ane mwana mumwe kana vaviri ane basa rakanaka, asina utachiona hweHIV. Nhare dzangu idzi 0778 853 843. ****Ndiri murume ane makore 48 nevana, ndinosevenza muhurumende uye ndakaremara. Ndine imba pamwe nepuroti, ndinodawo mukadzi anosevenza ane tunhu twake zvisinei nezera rake. Nhare dzangu idzi 0779 273 226.****Ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe, ndinodawo mukadzi anoda imba ane makore 25 zvichidzika, aine vana 2 kana 1. Vakadzi vevanhu ndinyareiwo, vane chokwadi ndibatei pa0738 822 313.****Ndine makore 29 uye ndiri kudawo musikana wekuwadzana naye. Anoda nhare dzangu idzi 0737 876 488. ****Ndiri murume ane makore 26 nevana vana vaviri uye ndinodawo mukadzi ane vana vaviri kana mumwe chete. Vasina vana musafona henyu. Ndinonzi Kuda, nhamba dzangu dzinoti 0771 293 480.****Ndiri murume ane makore 30 nemwana wangu mumwe uye ndinotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana wake asi achiendawo kubasa nekuchechi ane makore 20 kusvika 24. Ndingafare ndikawanawo munhu akaita seuyu nekuti ndinoda kuroora kwete anoda zvekutamba. Nhamba dzangu 0773 187 606.****Ndiri mujaya ane makore 35 uye ndinotsvagawo musikana kana mukadzi asina mwana kana anaye ane makore 27-34. Anoda fonai kana sms pa0733 886 479.****Ndiri murume ane makore 35, ndinodawo mukadzi ane makore 25 kusvika 29 ari pachokwadi chekuda imba. Nhare dzangu idzi 0716 183 968.****Ndiri mukadzi ane makore 46, ndinotsvagawo murume ane makore 46 kusvika 55. Ndiri HIV positive, vanoda nhare dzangu idzi 0739 144 824.****Vanhu ngavachirega kufona panhamba dzinoti 0775 032 310 nekuti ndakawanikwa. Makaita basa nechirongwa chenyu veKwayedza. ****Ndiri mukomana ane makore makumi maviri nemasere uye ndinotsvagawo mhandara ine makore 18 kusvika 20 inonamata chechi yepositori yekuBocha kwaMarange. Ini ndiri jaya, ndibatei pa0738 819 393 asi kana usiri Wasu usafone zvako. ****Ndiri mukadzi ane makore 47, ndinoshanda uye ndinoda murume anoshanda ane makore 39 kusvika 49. Anondida ngaandibate pa0713 545 111 asi vanoda kutamba kwete.****Ndiri murume ane makore 37, ndinopinda chechi yemweya uye ndinosevenza muhurumende. Ndinotsvagavo musikana ane makore 20 zvichidzika akavimbika asina mwana anopindawo chechi yemweya. Ndibatei pa0773 763 101.****Ini ndiri murume ane makore 42 uye ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba ane makore 30 kusvika 36. Ndinogara muHarare, nhamba dzangu 0775 897 631.****Ndiri mukadzi ane makore 37 nemwana mumwe, ndiri HIV positive uye ndakakuvara ziso. Ndinotsvakawo murume wekuchengetana naye anoshanda kana anozviitira mabasa emawoko sezvandinoita ini. Anonamata anoda ngaafone pa0736 776 846.****Ndiri murume ane makore 37 uye ndinodawo mukadzi ane makore 30 kusvika 35 anoshanda semukoti kana mudzidzisi. Fonai pa0773 452 146.ds
MAKADINI vekwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 42 nevana vatatu uye ndiri kutsvagawo murume wekugarisana naye ane makore 43. Nhare dzangu idzi 0737 201 477. ****	Thursday, 16 May 2013 08:25	MAKADINI vekwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 42 nevana vatatu uye ndiri kutsvagawo murume wekugarisana naye ane makore 43. Nhare dzangu idzi 0737 201 477.
NDIRI mukomana ane makore 33 asina kumboroora, ndinodawo musikana ane chokwadi ane makore 25 zvichidzika. Ari HIV negative ngaandibate pa0773 351 822.	Friday, 10 May 2013 06:19	NDIRI mukomana ane makore 33 asina kumboroora, ndinodawo musikana ane chokwadi ane makore 25 zvichidzika. Ari HIV negative ngaandibate pa0773 351 822.****Ini ndinonzi Tendai, ndiri murume ane makore 31 uye ndiri kutsvaga musikana wokuroora ane makore 18 kusvika 30 achigara kuHurungwe. Anoda kunotorwa ropa ngaafone kana kutumira sms pa0776 522 410.****Ini ndiri murume ane makore 28 ndinotsagawo mukadzi ari pasi pamakore angu anoda zvekupanana rudo ari muHarare. Vakadzi vevanhu musafona henyu. Akazvipira kunotorwa ropa ngaafone pa0736 844 471.****Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika pa25 ndinoda munhu ari pachokwadi. Ndibatei pa0738 337 402.****Ndakambonyorera ndikawana vane dzimba dzavo kare. Ndiri mukadzi ane makore 42 nevana vaviri, ndinotsvaka murume akavimbika ane makore 42 zvichienda mberi ane rudo. Vanoda ndibatei pa0713 505 724****Ndiri mukadzi ane makore 44 nemwana mumwe uye ndinodawo murume ane makore 50 kusvika pa62. Ndiri HIV positive, ndinoita mabasa emawoko. Andida asina mukadzi anoziva kuita mari ngaandibate pa0773 705 417. Zita ndiTama.****Ndiri mudzimai ane makore 31 nemwana mumwe, ndiri HIV negative uye ndiri kutsvaga murume ane makore 36-38 ane mwana, anotya Mwari. Ari mushandi muhurumende, ane rudo rwekuvaka imba. Ndibatei pa0773 643 506.****Ndiri musikana ane makore makumi maviri nemasere uye ndiri kutsvagawo mukomana ari pachokwadi anoziva Mwari. Ndakambomuwana wekuBindura akanditsotsa haana kuzodzoka anonzi Abednigor. Vari pachokwadi ndibatei pa0779 927 827.****Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana mumwe chete uye ndinotsvagawo murume anondida asi ndine chirwere. Anoda anondibata pa0713 174 987.****Ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo mukadzi akavimbika wekushamwaridzana naye chete ane rudo asina mumwe murume. Ndibatei paWhatsApp 0736 138 438, ngaave ane makore 23 kusvika pa36.****Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana ave kuda zvemba ane makore 19 kusvika pa24. Ndinoda anoshanda nekuti ini ndinoshanda. Unogona kutumira sms pa 0777 868 840.****Ndiri mukadzi ane makore 32, ndiri positive uye ndinoda murume ari positive. Ari pachokwadi ngaandibate pa0738 440 682.****Ndiri mukomana ane makore 23, ndiri kutsvaka musikana ane makore 18 kusvika 24 anoda zveimba. Ndinoshanda muhurumende, vanoda ndibatei pa0715 847 536 chero nguva.****Ndiri murume ane makore 43 nemwana mumwe ndinodawo mukadzi ane makore 36 zvichidzika ane mwana mumwe. Akavimbika anoda zvemusha asina utachiona hweHIV ngaafone pa0775 786 133.****Makadii henyu veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 23, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo mukomana ari sezvandiriwo. Ndinoda ari pachokwadi anoda kuroora nekuchata kwete zvekutamba. Nhare yangu iyi 0735 991 344.****Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvaga shamwarikadzi ine makore 26 kusvika 35 ane mwana mumwe kana vaviri, anoenda kuchechi. Ini ndine vana vaviri, anoda hupenyu hwemudhorobha pamwe nekumusha ngaandibate pa0776 993 086.****Ndiri mudzimai ane makore 38 nemwana 1 uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 39 kusvika 44. Ndibatei pa0712 285 624.****Ndiri mukomna ane makore 24 ndinotsvakavo musikana ane makore 18 kusvika 21 asina chirwere. Vanoda uye vari pachokwadi ndibatei pa0776 639 481.****Ndiri mukomana ane makore 29, ndiri disabled uye ndinodawo musikana ane makore 25 zvichidzika anonamata. Anoda anofona pa0736 541 318.****Ndine makore 36 nemwana mumwe uye ndinoita basa remawoko. Ndinotsvagawo murume ari positive sezvandakaita ane zvaanoita muupenyu, anonamata chechi dzemapentercost ane makore 39 kusvika 45. Vanoda kutaura neni fonai kana kutumira sms pa0778 381 192 asi ngaave ane vana.****Ndiri mukadzi ane makore 20 nevana vaviri uye ndinotsvagawo murume ane makore 25-35 ane vana vake. Ari pachokwadi anoda ngaafone pa0771 122 656.****Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvaga musikana anoda zvemba anogeza akanaka anonamata ane makore 18-23. Nhamba dzangu 0777 423 035, vanofona chete.Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 24 zvichidzika. Nhare dzangu 0772 330 614.****Ini ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 4 uye ndinotsvagawo murume ane makore ari pakati pe35 ne40 anoda zveupenyu. Ndibatei pa0737 461 905.****Ndiri murume ane makore 30, ndinodawo musikana ane makore 27 zvichidzika. Nhamba dzangu idzi 0715 325 412.****Ndiri mukomana ane makore 20 uye ndiri kutsvagawo musikana ane makore kubva 18 kusvika 21 wemuHarare. Ndibatei pa0734 537 650.****Ini ndiri murume ane makore 36, ndinoda musikana ane makore 25 zvichidzika ane mwana mumwe kana asina. Ari negative anoda zvemba ngaandibate pa0713 813 723.****Ndiri mukadzi ane makore 42 ndinoda murume ane makore 43 zvichienda mberi. Ndiri HIV positive, handidi varume vevanhu. Ndibatei pa0771 217 302.****Ndiri mudzimai ane makore 41 nevana vaviri, ndinotsvagawo murume ane makore 46-55 ane tsiye nyoro, akarongeka uye akafirwa nemukadzi. Ndibatei pa0713 763 106.****Ndiri mukomana ane makore 28, handishandi pakambani uye ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore ari pasi pe24 achigara muHarare, kunyanya asingashandi. Nhare dzangu idzi 0738 858 370.****Ndinotsvagawo shamwari yechikadzi ine makore kubvira pa18 kusvika 30 achigara kuChitungwiza. Nhare dzangu 0774 958 714.****Ndiri mudzimai ane makore 36 uye ndinodawo murume ane makore 38 zvichikwira. Ndapota zvangu vakawana musandifonera ndakambonyorera saka murume wandakanga ndawana akaroora handidi kuputsa dzimba dzevamwe. Ndinoshanda, ndiri pachirongwa uye ndine hutano hwakanaka. Ndinoda murume anogeza nokuti ini ndakagezeka, fonai pa0776 188 762.****Makadii zvenyu veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 40 ndinotsvagawo murume ane makore 45. Ndinoda ane chokwadi pakuchengetana, nhare dzangu dzinoti 0773 403 853. Ndine vana vangu vana, ndinobva kwaMutare.****Ini ndiri mukadzi ane makore 28 uye ndinotsvagawo murume akatendeka anotya Mwari anoda zvekumisa imba ane utano. Ndine mwana mumwe chete ndinoshanda, iyewo anofanirawo kuva nevana vaviri kana mumwe uye achishanda muhurumende. Nhamba dzangu 0773 151 806, anoda ngaafone chero nguva. Varume vevanhu kwete nekuti handidi kuitwa small-house.****Ndiri mukomana ane makore 24, ndiri kutsvaga musikana ane makore 18-23 wemuHarare wekufambidzana naye tozoroorana kana tawirirana. Nhare dzangu idzi 0738 978 517.****Ndinonzi Liberty Runzonza ndiri mudzidzisi uye ndine makore 25. Ndinodawo musikana wekuvaka naye imba ari pachokwadi ane makore 20 kusvika 24. Nhare dzangu idzi 0716 204 850.****Ndiri murume ane makore 28 ndiri kutsvaga musikana ane makore 25 ari pachokwadi. Anoda anondibata pa0735 403 632.****Makadini weKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 26 uye ndiri kutsvaga musikana ane makore 24 zvichidzika. Ndibatei pa0778 022 787.****Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 anoda zvokuwanikwa anotya Mwari chokutanga uye asina meso-meso. Ini makore angu okuberekwa i24. Fonai pa0714 503 645.****Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera asi ndaingowana vasina chinangwa. Ndapota ini ndiri kuda mukadzi ari pachokwadi ane mwana wake ane makore 20 zvichikwidza. Ini ndine makore 24, kubhipa kana macall back kwete. Ndibatsireiwo nekubuditsa sms nhare dzangu idzi 0776 676 909.****Ndiri musikana ane makore 34 ekuberekwa uye ndinoda murume ane makore 39-45 anotya Mwari. Anoda zvekunamata nhamba dzangu dzerunhare dzinoti 0773 963 117.****Ndiri mukomana ane makore 21 ndinoshanda uye ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Ngaandifonere panhamba idzi 0776 573 061.****Ini ndiri mukomana ane makore 32, ndinoshanda uye ndinotsvaga musikana ane makore 25-30 anoda imba kwete zvokutamba. Nhamba dzangu idzi 0773 731 958.****Ndiri mukadzi ane ane makore 42 nemwana mumwe uye ndinodawo murume ane makore 42 zvichikwira asina kuroora. Matsotsi kwete, nhamba dzangu 0738 644 804.****Ndiri mudzimai akavimbika, akazvibata ane makore 34 nemwana mumwe uye ndinotsvagawo murume akavimbika ane makore 34 kusvika 40 ane mwana, asina mukadzi. Ngaave anoshanda nekuti ini ndine basa randinoita ndiri pamba. Ndinonamata uye ndiri HIV negative. Anoda ngaandibate pa0775 485 547.****Makadii henyu veKwayedza? Ini ndinosimba hangu, ndiri mudzimai ane makore 42 uye ndiri kutsvagawo murume ane makore anotangira pa46 kusvika 50. Ndinoda akagezeka uye ndiri positive saka ndinodawo akadaro. Ndine vana vangu vatatu, anondida anondibata pa0775 253 872.****Ndiri mukadzi ane makore 26 nemwana mumwe uye ndinotsvagawo murume ane makore 28-32, anonamata asina chirwere. Anoshanda ngaandibate pa0773 590 840.****Ndiri murume ane makore 35 uye ndinotsvaga mudzimai ane makore 25-35 ari kuda zvemba pachokwadi anoda kunotorwa ropa. Ndibatei pa0778 202 909.****Ndiri mukomana ane makore 22 uye ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 21, anonamata anogezawo. Fonerai Chriswell pa0772 378 841.****Ndiri murume ane makore 56, ndinotsvaga mudzimai anoda zvemba ane makore 37 kusvika 45 anonamata. Ndinogara kumusha ndinorima uye ndiri HIV positive. Matsotsi kwete, vari pachokwadi fonai pa0714 162 100.****Ndiri murume ane makore 35 nevana vaviri uye ndinoshanda. Ndiri kutsvagawo mukadzi anoda zvemba, akavimbika, akarongeka, anonamata. Ndinoda anokwanisa upenyu hwemudhorobha nekumusha. Nhare dzangu 0738 540 988****Ndiri murume ane makore 50 nevana 2 uye ndinodawo mudzimai akanaka anotya Mwari ari negative ane makore 28 kusvika 40 achigara muHarare kana pedyo. Vanoda zvemba ndibatei kana kutumira sms pa0774 553 296 asi kwete macall me back.
NDIRI mukomana ane makore 33, ndiri kutsvagawo shamwari (penpals). Vanoda ndibatei panhamba idzi 0773 228 562.****Ini ndiri mukomana ane makore 23 uye ndiri kutsvaga musikana wekuroora. Ndiri mudzidzisi, nhare dzangu idzi 0778 180 590.****Makadini veKwayedza? Ini ndinotsvagawo musikana ane makore 19 kusvika 22. Ngaafone pa0714 588 796.****Ndiri murume ane makore 34 nemwana mumwe chete uye ndinotsvaga mukadzi ari pachokwadi ane makore 24-30 ari mugari weZimbabwe asati amboenda kunze kwenyika. Ane mwana mumwe ngaandibate pa0779 958 755.****Ndiri mukomana ane makore 26 ndinonwa doro uye ndiri kutsvagawo shamwarikadzi ine makore 18-24 anotya Mwari, ane rudo anoziva zvaari kwete pfambi. Anogeza achishanda ngaandibate pa0773 774 847.****Ndiri murume ane makore 47, ndiri positive uye ndiri kutsvagawo mudzimai ari pachokwadi ane makore 30-40. Nhare dzangu idzi 0712 574 868.****Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana vatatu, ndinotsvagawo murume ane makore 38 zvichikwira. Anofarira kuzvishambidza anoda ngaafone pa0738 051 675.****Kwaziwai mose, kune vose vaimbondifonera panhamba idzi 0736 019 450 chiregerai ndakazomuwana wandaida.****Ndiri mudzimai ane makore 42, ndakafirwa nemurume uye ndiri kutsvaga murume anoda kuroora kana anoda hake kuti tichengetane. Ndine mwana mumwe chete, vanoda nhare dzangu idzi 0775 792 019.****Ini ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 22 zvichidzika. Nhamba dzangu 0779 851 908, fonai makasununguka. Ndatenda.****Ndiri mudzimai ane makore 40 uye ndinotsvagawo murume akavimbika ane rudo. Ndinorarama neutachiona hweHIV. Ndibatei pa0734 117 189.****Ndinodawo musikana ane makore 18 zvichienda mberi anoda kuroorwa kwete zvedambe neni. Ngaature neni paWhatsApp kana kufona pa0774 330 800.****Ndiri mukadzi wemakore 41 ari HIV positive uye ndinotsvaga shamwari yechirume ine makore 41-50 ari positivewo tichengetane. Fonerai Petty pa0714 662 964.****Ndiri murume ane makore 33 uye ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 30 kusvika 33 anonamata Johane Masowe. Ndine vana 2, ane vana vaviri ngaafone pa0778 776 519.****Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 30. Ini ndine makore 30 uye ndiri kudawo mukadzi ari pachokwadi. Nhare dzangu idzi 0715 773 332. ****Ndiri musikana ane makore 19 uye ndinotsvaga mukomana ane makore 20 kusvika pa27 ari positive seni. Ndine mwana mumwe, ari pachokwadi ngaandibate pa0712 382 713.****Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 35 nevana vaviri uye ndinotsvagawo mukadzi wekuchengetana naye. Anoda zvemba ngaandibate pa0777 645 875.****Ndiri mukadzi ane makore 32, ndiri positive ndinoda murume ari positive ari pachokwadi. Nhare dzangu 0738 440 682.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 21 uye ndinotsvagawo musikana akavimbika ane makore 20 zvichidzika. Ari pachokwadi nhamba dzangu 0773 965 357.****Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana mumwe, ndinotsvagawo murume ane makore 25-29 akavimbika, anoshanda ave kuda zvemba ari negative. Ndibatei pa0735 789 180.****Ndiri mukadzi ane makore makumi mana ekuberekwa nevana vatatu, ndinonamata Johane Masowe echishanu. Ndiri kutsvagawo murume ane makore 45 kusvika 50 anonamata, ndinogara kuMondoro-Ngezi. Nhamba dzangu 0715 688 025.****Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana vatatu, ndinodawo murume ane makore 40 kusvika pa50. Ari pachokwadi ngaandibate pa0737 466 727.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 37 ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ari pachokwadi achirarama neutachiona hweHIV. Ndine vana vaviri, nhare dzangu idzi 0772 764 722.****Makadini veKwayedza? Ndakambokutumiraiwo chichemo changu asi handina kupindurwa. Ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi. Ndiri mukadzi ane makore 44 uye ndinodawo ane makore 45 kusvika 55. Ndine vana vangu, nhare dzangu idzi 0733 878 746.****Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana ane makore 18-23. Nhamba dzangu 0774 466 682.****Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 33 nevana vaviri uye ndiri kutsvaga murume wekushamwaridzana naye kubva pamakore 35 kusvika 40. Nhamba dzangu idzi 0777 514 517.****Ndiri murume ane makore 35 nemwana mumwe, ndiri positive uye ndinotsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 30 anoda zvemba anoshanda. Ndibatei pa0715 715 081.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 uye ndinotsvaga musikana ane makore 18-19. Anoda nezvangu ndinobatika pa0715 210 556. Ndinoshanda macall back kwete.****Ndiri mukadzi ane makore 24 uye ndinotsvagawo murume anoda kuroora, anoda Mwari. Varume vevanhu kwete, nhare dzangu 0714 326 452.****VeKwayedza makaita basa nekushambadzira ndakaroorwa zvakanaka. Vose vaifona pa0779 075 199. Chiregedzai zvenyu.****Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 20, ndakazvarwa ndiri positive uye ndinotsvagawo mukomana ane makore 22-26 anoda kuroora asina mwana. Fonai pa0776 989 679.****Ini ndiri mukadzi ane makore 39 asina mwana uye ndinoda shamwarirume ine makore 40-50 ari negative anotya Mwari. Anopinda chechi yeSDA ngaandibatei pa0736 387 056.****Ndiri murume ane makore 30 uye ndinotsvagawo mukadzi ane makore 24 - 28, asina mwana ari pachokwadi nekuvaka imba ane rudo. Anoda anofona kana kutumira sms pa0774 763 083. Macall me back kwete.****Ini ndiri mukomana ane makore 28 ari kutsvaga musikana akavimbika anoda kuroorwa ane makore 22-25. Handishande, vanoda ndibatei pa0778 764 275.****Ndiri murume anoshanda ane makore 25 nemwana 1. Ndiri kuda kuroora, anoda ngaandibate pa0779 777 753 asi macall me back kwete. ****Ini ndiri mukomana ane makore 21 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 21 zvichidzika akanaka kunyangwe aine mwana. Anoda ngaafone panhamba dzinoti 0779 161 138.****Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana vaviri, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi, anonzwisisa ane makore 46-55. Ndinoda asinganwi doro kana kuputa fodya. Fonai pa0713 763 106.****
Tishamwaridzane	Thursday, 02 May 2013 09:42	NDIRI mukadzi ane makore 36 uye ndiri kutsvagawo murume ane rudo nekuti ndinoda kudiwa. Nhare dzangu idzi 0738 611 922.
NDIRI mukadzi ane makore 39 nevana vaviri uye ndiri kutsvagawo murume akatendeka anoda kuroora. Ndinoenda kubasa saka ndinodawo anoenda kubasa. Vari pachokwadi ndibatei pa0738 385 134.	Monday, 29 April 2013 09:02	NDIRI mukadzi ane makore 39 nevana vaviri uye ndiri kutsvagawo murume akatendeka anoda kuroora. Ndinoenda kubasa saka ndinodawo anoenda kubasa. Vari pachokwadi ndibatei pa0738 385 134.****Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi anoda imba ane makore 47-50 ane vana. Ndiri mudzimai ane makore 38 uye ndine vana vatatu. Nhamba dzenhare 0714 601 012, handidi call me back. ****Ndiri mukomana ane makore 20, ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 kusvika 19. Nhamba dzangu idzi 0775 327 252.****Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 47, ndiri kutsvaka shamwarikadzi ine makore 28 kusvika 45. Ndibatei nesms kana kufona pa0779 708 504.****Ini ndiri mudzimai ane makore 28 nemwana mumwe uye ndinotsvagawo murume ane makore 31 kusvika 36 akatendeka anotya Mwari anoda zvekumisa imba ane utano. Ndinoshanda uye ndinodawo anoshanda muhurumende. Nhare dzangu 0773 151 806, anoda ngaafone chero nguva.****Makaita basa veKwayedza, ndinokumbira kuti vachiri kufona pa0777 109 947 ngavachiregedza, ndimboona kuti wandakaona anoita here.****Ndiri mukomana ane makore 24, ndiri HIV positive uye ndinotsvaga musikana anoda zveimba ane makore 19 kusvika 23. Ndibatei pa0736 071 818. ****Ndiri mudzimai ane makore 30 nemwana mumwe chete, ndiri kutsvagawo murume ane makore 35 zvichienda mberi. Nhamba dzangu 0733 389 517.****Makadini veKwayedza. Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana mumwe uye ndinozviitira mabasa angu emaoko. Ndinotsvagavo murume ane makore 30-35 anoda zvekuroora, asina mukadzi akavimbika anotya Mwari. Anoshanda anoda nhamba dzangu 0737 670 791 asi macall me back kwete.****Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvakawo musikana ane makore 19 kusvika 23 kana ane mwana wake. Vari pachokwadi ndibatei pa0775 157 745 asi kubhipa nemacall back kwete. ****Ndiri kuda mukadzi wokuroora ndine makore 37. Mudiki kwandiri ngaandibate pa0773 401 731.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndinoshanda uye ndinotsvagawo musikana wekudanana naye. Anoda ngaandibate pa0772 494 404, ndatenda.****Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana vaviri uye ndinodawo murume anotaridzika ane makore 29 kusvika 35. Nhare dzangu 0777 952 003.****Ndiri mukadzi ane makore 35 nevana vatatu, ndinotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 55 akavimbika anotya Mwari. Ndinoda ane vana vakewo achirarama ari positive seni. Vemiedzo ityai Mwari, nhare dzangu idzi 0712 590 958.****Ndiri mukomana ane makore 29 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 24 kusvika 27 akanaka anogeza asina mukondombera afunga zvemba asingataurise. VekuEpworth kwete, vamwe ndibatei pa0715 839 698.****Ndiri murume ane makore 32 asina mwana, ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 26. Ngaave anoda zvevhu nekuti ndiri papurazi, vanoda fonai pa0773 569 162.****Ndiri murume ane makore 36 uye ndiri kutsvaka mukadzi wekuroora ane makore 25 kusvika 29 chero ane mwana 1. Ane chido nokuda imba ngaandibate pa0773 250 851.****Ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe uye ndinoda mukadzi wekuroora akavimbika ane makore 20 kusvika 28. Ndiri HIV positive, nhamba dzangu 0775 518 847.****Ndinoda musikana ane rudo rwechokwadi ane makore 19 zvichidzika oda zvekuroorwa. Ndiri mukomana ane makore 21, mondibata pa0715 388 693.****Ndiri mhandara ine makore 28 uye ndinoda jaya rine makore 28-35 anoda muchato nekuongororwa ropa. Ngaave akaremara anoshanda basa rakanaka, anoziva Mwari. Ndibatei pa0735 001 837.****Ndapota matsotsi kwete vanoda kutamba siyanai nene. Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 2, ndinorarama neHIV anoda anondibata pa0778 192 325.****Ndinotsvakawo mukadzi ane makore 23 zvichidzka ane mwana mumwe kana asina. Ini ndine makore 25. Fonai pa 0736 027 150.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore gumi nemasere uye ndiri kutsvaga musikana anoda kuve shamwari yangu ane makore gumi nemasere anoenda kuchechi. Kana aripo fonai pa 0737 599 963. ****Ini ndiri mukomana ane makore 30 ekuberekwa uye ndiri kutsvagawo musikana ane makore 24 kusvika 28. Anenge achida nezvangu nhare idzo 0734 964 357. ****Ndiri musikana ane makore 29, ndinotsvagawo murume akavimbika ane hunyoro anomata kumasowe ave kuda kuvaka musha ane makore 34 kusvika 40. Ane mwana mumwe chete uye achishanda basa rinonzwisisika. Ini ndinoshanda mumba. Ndiri kuda vekuMashonaland Central kunyanya, fonai chero ipi nguva pa+27 845 253 423.****Ini ndiri murume ane makore 34, ndiri HIV positive uye ndinotsvakawo mudzimai ane makore ari pasi peangu akavimbika. Ndinoda anoshanda asi ini handisi kushanda parizvino. Ari pachokwadi ngaafone panhamba idzi 0736 968 535.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 uye ndiri kutsvagawo musikana anoda zvemba ane makore ari pakati pe18 - 23 anofarira kunamata uye akavimbi ka. Ndibatei pa0714 571 544.****Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvaga musikana ane makore 18-24 ari pachokwadi. Anoda fonai pa0715 734 565.****Ndiri murume ane makore 41, HIV positive uye ndinoda mudzimai ane makore 24 — 35 ari positive. Ndinoda anoshanda ane mwana kana asina, ndibatei pa0778 141 795.****Ndiri mukadzi ane makore 44 nevana vaviri, ndinodawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 46 kusvika 48. Ndinoshanda, nhare dzangu 0713 960 688.****Ini ndiri mudzimai ane makore 34, ndiri HIV positive uye ndiri kutsvagawo murume ane makore 35-50. Anoda nezvangu nhamba dzangu idzi 0773 206 182.****Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvaga musikana asingadi mari ane makore 18 kusvika pa22 mupfupi, ari mushava. Ndinoda ane muviri wakasimbawo ave kuda zvemba, anotya Mwari ari HIV negative. Anoda kuongororwa ropa ngaandifonere pa0776 629 458. Vasiri pachokwadi musafona.****Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera asi ndakawana matsotsi evasikana. Ndiri mukomana ane makore 29 uye ndinoda ane makore 20 kusvika 22 ari pachokwadi. Macall me back kwete, nhamba dzangu 0775 425 122.****Ndiri murume ane ane makore 29 uye ndiri kutsvagawo mudzimai asina mwana kana ane mumwe chete. Ndibatei pa0715 646 052.****Ini ndiri mukomana ane makore 19 ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi anoda zverudo anoenda kusvondo. Ndibatei pa 0713 826 932.****Ndiri mukomana ane makore 28 ekuberekwa uye ndiri kutsvaga mudzimai wekuroora ane mwana kana asina ari pachokwadi ane makore 18 kusvika pa26. Ndinoda anozvishandira ini ndinoshanda muhurumende ndinogara kuNorton. Macall back kwete, vanenge vandifarira nhamba dzangu idzo 0779 840 498. Zita rangu ndinonzi Trymore Muchada. ****Ndinotenda vakambondifonera pa0715 008 448 chiregai zvenyu ndakamuwana wandaitsvaga. ****Ndinokumbira vaifona pa0714 586 689 vachirega zvavo.****Ndine makore 37 uye ndinoda mukadzi wokuroora mudiki kwandiri. Ndibatei pa0738 563 041.****Ndiri mukadzi ane makore 33, ndiri positive uye ndinotsvaka murume ari pachokwadi ari positive. Ari pedyo neGweru ngaafone pa0738 440 682.****Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana vaviri uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 39 kusvika 50. Ndiri mupfupi, fonai pa 0775 732 257.****Ndiri mukomana ane makore 22, ndinodawo musikana ane makore 20 zvichidzika. Ndinoda mutsvuku, akavimbika zvakare anogara nekushanda muHarare. Ini ndinoshandawo, anotya Mwari ngaandibate pa0773 161 903.****Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 26 ekuberekwa nevana vaviri uye ndiri kutsvakawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi. Musadye manonoko nekuti ndiri pachokwadi, macall back, sms nemasaimba kwete. Ndinoda vari pachokwadi, nhamba dzangu idzo 0716 162 211.
Ndiri murume ane makore 29, ndinotsvakawo musikana akavimbika akanaka. Vari pachokwadi ndibatei pa0773 343 551	Friday, 19 April 2013 08:49	NDIRI murume ane makore 35 nemwana mumwe uye ndinodawo mudzimai ane makore 33 zvichidzika ane chaanoita muupenyu akashambidzika. Macall me back kwete, fonai 0738 747 589.****
Makadii veKwayedza? Ndinopa kutenda kwamuri nebasa ramakaita ndakazomuwana anondida neni ndichimudawo saka vaifona pa0776 728 924 chiregai zvenyu.
****Ndiri mukadzi ane makore 44 nevana vaviri, ndinodawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 46 kusvika 48. Ndinoshanda, ndibatei, 0713 960 688.****Ndiri murume ane makore 31 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 20-25 anoda zvemba. Asinganditambisire nguva ngaandibate pa0777 248 854.****Ndiri mudzimai ari HIV+ uye ndinotsvagawo shamwari (penpals) dziri HIV+. Vane makore 38 zvienda mberi fonai pa0775 397 229 motaura naFari.****Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18-23 ari pachokwadi. Ndapota kubhipa kana call back kwete, anoda anondibata pa0734 479 551.****Ndiri musikana ane makore 21 uye ndiri kutsvagawo mukoma anoda zvekuroora ane makore 21 kusvika 40. Fonai: 0778 343 504.****Kwaziwai veKwayedza. Ndakambonyorera asi handisati ndawana, ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vaviri uye ndiri HIV positive. Ndiri kutsvagawo murume anoda zvemba ari pachokwadi ane makore 40-55 ari positive asi matsotsi musafone zvenyu. Nhare dzangu idzi 0735 178 813.****Ndiri murume ane makore 32 nemwana uye ndinotsvaga shamwarikadzi. Nhare dzangu 0773 211 264 asi ndinoda munhu anoshanda kana ane mwana asina chirwere, akavakika zvakanaka.Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28 uye ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 26 zvichidzika. Ndine mwana mumwechete, ndinoshanda. Ndibatei pa0738 596 856. ****Makadii zvenyu veKwayedza? Ndinokumbirawo kuti mundiburitsirewo tsamba yangu, ndiri mukomana ane makore 27 uye ndiri kutsvaga musikana wekuroora. Ari pachokwadi ngaandibate pa0778 159 176 asi kwete macall me back.****Ndiri murume ane makore 36 nemwana mumwe chete. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 29. Ngaavewo nemwana mumwe chete, anotya Mwari, anoshanda mumba kana asingashandi. Asingasaruri kwekugara anozvipira kutorwa ropa ngaandibate pa0716 148 295.****Ndiri mukomana ane makore 29 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 24 kusvika 27 akavimbika. Nhamba dzangu idzi 0715 757 608. Kwayedza rambai makashinga.****Angu makore i43 nevana vaviri. Ndinodawo mukadzi akavimbika nekurongeka ane makore 30 zvichidzika ane mwana kana asina. Ngaave anoita basa reuneni, anoziva zvekumusha achibva mamaruwa ari pedyo neHarare. Ari pachokwadi ari HIV negative ngaandibate pa0776 746 381.****Ndakambonyorera asi handisati ndamuwana wandiri kuda. Ndine makore 35 ndinotsvagawo musikana ane makore 23 kusvika 27 ari pachokwadi ave kuda zvemba. Nhamba dzangu 0772 468 303 asi handidi macal me back.**** Ndiri mukomana ane makore 25 uye ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 20 anoda kuwanikwa. Ari pachokwadi ngaandibate pa0716 065 996.****Ndiri mudzimai ane makore 47 anove chirikadzi, ndinoshanda muhurumende uye ndinotsvakawo shamwari yechirume ine makore 47 zvichikwira asina mudzimai. Ari pachokwadi ngaafone pa0733 931 191.****Ini ndiri musikana ane makore 24 uye ndinotsvakawo murume ane makore 40 zvichidzika anoshanda, ane rudo. Ndine mwana mumwe chete, nhare yangu iyi 0777 251 332.****Ndiri murume ane makore 32 uye ndinotsvakawo mukadzi ane makore 20 kusvika 28 akazvipira kuenda kuNew Start Centre. Ndibatei pa0716 157 238 asi call me back kwete.****Makadini zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana vaviri, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume akavimbika ari positive anotya Mwari. Vanoda zvekutamba kwete, fonai 0773 688 917.****Ndiri mukomana ane makore 24, ndiri kutsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 22 anoshanda ane rudo achida zvekumusha. Nhare dzangu 0775 846 069.****Ndiri mukadzi ane makore 30 uye ndiri kutsvakawo murume ane makore 35 asina chirwere. Ndine vana vaviri, ndibatei pa0715 561 386.****Munofara here? Ndiri kutsvakawo murume ari pachokwadi chekuroora kwete varume vevanhu musandifonerawo ndapota zvangu. Ndakasangana netsotsi, ndine makore 32 nemwana mumwe uye ndinoda ane makore 35 kusvika 50 ane vana 3 asi majaya kwete. Ndinonzi Tatenda, nhare yangu iyi 0738 328 367. Macall me back nekubhipa handidi.****Ndiri mukomana ane makore 28, ndiri disabled uye ndinodawo musikana ane makore 22 zvichidzika. Ndinoita zvekutengesa, vari pachokwadi ndibatei pa0736 541 318.****Ndiri mukomana ane makore 30, ndinotsvagawo musikana kana mudzimai ane makore 18 kusvika 30. Nhamba dzangu idzi 0735 313 496.
Makadini veKwayedza? Ndinotenda zvikuru ndakazomuwana murume wandaida nekudaro vose vaifona pa0714 430 648 ngavachirega zvavo.****Ndiri mukomana ane makore 28, ndinoshanda uye ndinotsvakawo musikana akavimbika ane makore 20 kusvika 26. Vanoda ndibatei pa0716 161 274.****Ndiri mukadzi ane makore 40 nemwana mumwe uye ndinotsvakawo murume ari pachokwadi ane makore 40 kusvika 60. Ndibatei pa0734 401 497.****Ndiri mukomana ane makore 25, ndinoda musikana ane makore 18 kusvika 24 anonamata anoenda kubasa. Ndapota vemiedzo siyanai neni nezita raJesu Ameni. Ndibatei 0734 843 128.****Ndiri mukomana ane makore 28, ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 20-25 ane mwana mumwe. Ndinoda anogara kumaruwa, ini ndinogara kwaSeke. Ndibatei pa0779 578 758.****Ndiri mukomana ane makore 27, ndinoda musikana ane makore 20 kusvika 25. Ndibatei pa0777 057 580 asi call me back kwete.****Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana anoonekera uye ndinotsvakawo musikana. Ndine makore 27, nhamba dzangu 0775 991 105.****Ndiri musikana ane makore 21 uye ndinotsvagawo mukomana ane makore 21 kusvika 30 anoda zvekuroora, anoshanda. Nhamba dzangu idzi 0778 343 504.****Vaifona panhamba dzinoti 0738 883 305 chiregai henyu ndakamuwana wandaida.****Kwaziwayi veKwayedza, ini ndiri murume ane makore makumi matatu nemashanu nemwana umwe uye ndinotsvaga mukadzi asinganwi doro. Ndinoda ane makore akafanana neangu zvichienda mberi. Nhamba dzangu dzinoti 0773 465 240.****Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 40 ndinotsvaka murume ari positive nekuti iniwo ndiri positive. Ndine vana 3 ndinoda asiri tsotsi, ane rudo. Ndibatei pa0775 253 872.****Ndiri murume ane makore 40 uye ndinotsvakawo mudzimai ane makore 30 kusvika 34. Nhare dzangu 0737 675 325.****Ndiri murume ane makore 29, ndinotsvakawo musikana akavimbika akanaka. Vari pachokwadi ndibatei pa0773 343 551.****Ndiri murume ane makore 40, ndiri pabasa, handina mwana uye ndinoda mukadzi anonamata ane makore 25-40. Vanoda fonai pa0773 197 626.****Ndiri murume ane makore 38 uye ndinotsvagawo wangu mudzimai. Vanondidawo fonai pa0776 730 845.****Ini ndine makore 28 uye ndiri kutsvagawo mudzimai akavimbika ave kuda zvemba anoshanda. Fonai kana kutumira sms pa0737 691 126.****Ndine makore 37, ndinotsvaga shamwari yechikadzi ine makore 28-35 ichigara muHarare. Nhamba dzangu 0773 476 865.****Ndiri mudzimai ane makore 37 uye ndiri kutsvagawo shamwari yechirume yekugara nayo kweupenyu hwose ine makore 42-57 inoenda kuchechi. Nhare dzangu idzi 0715 523 494.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana mumwe, ndiri kutsvaga murume akatendeka ari kuda zvekuroora akarongeka ane makore 24 kusvika 30. Ndinobatika pa0779 716 930.****Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 29 nevana vatatu, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 35-40. Ndiri positive, vanondidawo ngavafone pa0773 545 015.****Ndiri mukadzi ane makore 31 nemwana 1 uye ndiri positive. Ndinotsvagawo murume ariwo zvandiri asina mukadzi anotya Mwari. Fonai pa0738 215 395.****Ndine makore 48 nevana 2 uye ndinoda murume ane makore 50 kusvika 65. Ndinoshanda, ndiri HIV positive. Ndibatei pa0715 330 164.****Ini ndiri mukadzi ane makore 34 ndinotsvagawo murume ane makore 35-45. Ndiri HIV positive ndinoda wekugara naye, ndine vana 3. Nhare yangu 0773 206 182.****Ndiri murume ane makore 28 uye ndinoda musikana ane makore 20 kusvika 26 anoda zvekuroorwa. Fonai pa0735 403 632.****Makadini veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 24 uye ndinotsvaga murume wemakore 27 kusvika 35 anoda kuwana asina chirwere, anoshanda. Ngaafone panhamba dzinoti 0775 101 581.****Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 4 uye ndiri kudawo shamwari yechirume inondivaraidza yakanaka, ine rudo ichidawo Mwari. Vane makore 36 kusvika 45 fonai pa0737 781 033. Ndatenda.****Ini ndiri murume ane makore 34 nevana vaviri uye ndinoda mukadzi ane makore 22 kusvika 30 chero ane mwana kana asina. Fonai pa0772 707 168.****Zita rangu ndiGlades Sibanda, ndine makore 50 nevana 3. Ndinosona, ndinopfuya huku uye ndine mugodhi wangu wezvicherwa. Murume wangu akashaika saka ndotsvagawo anorevesa anoda kuchengetana neni ane makore 60 zvichikwira, anonamata. Fonai pa0775 396 804.****
NDIRI mukadzi ane makore makumi maviri nemanomwe nemwana mumwe uye ndinotsvaka murume wekuchengetana naye. Ndibatei pa0738 526 679.	Friday, 05 April 2013 12:55	NDIRI mukadzi ane makore makumi maviri nemanomwe nemwana mumwe uye ndinotsvaka murume wekuchengetana naye. Ndibatei pa0738 526 679.****Ndiri murume ane makore 39 uye ndinotsvagawo mudzimai ane makore 38 zvichidzika. Nhare dzangu idzi 0736 839 262.****Ndiri murume ane makore 42 nemwana mumwe uye ndinoda mukadzi anoda kuroorwa. Ndinoshanda muhurumende, nhamba dzangu 0774 385 058.****Vabereki ngatinzwisisei musati mandifonera, ndinoda murume anogeza ane rudo. Kave kechitatu ndichinyorera, ndine makore 33 nevana vaviri uyezve ndiri HIV positive. Ndinoda murume ane makore 35 kusvika 45 anoda zvemba. Kana usati wave kuziva zvauri kuda usandifonere zvako. Vakafirwa ndivo vandiri kunyanyoda. Nhare dzangu idzi 0773 971 626 asi call me back kwete.****Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana vaviri uye ndiri kutsvagawo murume wekuwanana naye. Vanoda ndibatei pa0737 853 791.****Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 26 nevana vaviri uye ndinotsvakawo murume ane makore 30 kusvika 36 anoshanda basa riri nani nekuti ini ndine zvandinoita. Anogeza aine vana vake ngaandibate pa0776 266 516. ****Makadiiko vedare? Ndiri murume ane makore 31 nevana 3, ndiri negative uye ndinodawo mukadzi ane makore 30 zvichidzika ari pachokwadi chero ane vana vake. Vari pachokwadi fonai pa0779 190 940. ****Makadii veKwayedza? Ndine makore 33 nemwana mumwe chete uye ndinodawo murume ane mwana wakewo mupostori weJohane Masowe. Nhamba dzangu idzi 0773 643 270. ****Ini ndine makore 20 uye ndiri kutsvakawo musikana ane makore 22 zvichidzika. Ndinoda munhu wandingavimbe naye. Nhamba dzangu 0738 231 435 kana call back ndinofona.****Ndiri musikana ane makore 21 uye ndinotsvagawo mukomana ane makore 22-30. Ndibatei pa0738 515 289, handidi vanonyepa.****Ndinoda mukadzi anoda zvemba anoshanda ane mwana 1, ini ndine vatatu. Kana aripo ngaafone pa0777 400 703 asi vanoda zvokutamba musapedze nguva yenyu. ****Ndiri mukadzi ane makore 35 nevana vaviri, ndiri positive uye ndiri kutsvagawo murume ane rudo anonamata ane vana vake, ane makore 38 kusvika 45. Anoda ngaandibate pa0738 903 865. ****Ndiri mukomana ane makore 30 ndinoda musikana anoda zvemba ane makore 20 kusvika 32. Ndinoita mabasa emawoko, ndiri kuda ari pachokwadi kwete vanotamba. Ndibatei pa0715 440 409. ****Ndiri murume ane makore 42, handisati ndaroora uye ndinotsvagawo shamwari yechikadzi. Nhamba dzangu 0778 932 902.****Makadini veKwayedza? Ini ndinofara, ndiri mudzimai ane makore 42 nevana 2 uye ndiri HIV+. Ndinodawo murume ane makore 42-50 anoshanda. Ini ndinoshanda muHarare, vanoda zvekutamba regai henyu. Ndibatei pa0714 586 689. ****Ndiri murume ane makore 29 ndiri positive uye ndinotsvakawo mukadzi wekuroorana naye ane makore 20 kusvika 29 ari pachokwadi nezvekuvaka imba. Nhare dzangu 0738 793 074. ****Ndiri mukadzi ane makore 29 okuberekwa nemwana mumwe uye ndinotsvaka murume ari pachokwadi anonamata ane makore 31 kusvika 35. Ndiri HIV negative, vanoda ndibatei pa0715 460 616. ****Makadini henyu veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39 nevana vatatu uye ndinotsvagavo mukadzi ane makore 30 zvichidzika anoda imba. Ndinoda anonamata, ndinogara kuMasvingo. Ndibatei pa0772 384 593 kana sms kwete call back.****Ndinotenda nechirongwa chenyu cheTishamwaridzane. Ini ndiri murume ane makore 36 uye ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 20 kusvika 28. Anoda ngaandinyorere padandemutande rinoti simentit@gmail.com kana kundibata pa0737 489 595. ****Ndine makore 35 nevana vatatu uye ndinoda murume ane makore 40 kusvika 50 anonamata. Ari pachokwadi, ngaandibate pa0737 528 150.****Ndiri musikana ane makore 21, ndiri positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 25 kusvika 35 ave kuda zvemba ane mwana kana asina. Ngaave ari positive sezvandiri achishanda. Ndibatei kana sms pa0734 761 965.****Ndine makore 28 ndinodawo mukadzi akanaka ari pasi pemakore 30. Ndibatei pa0713 282 595.****Ndiri mukomana ane makore 25, HIV negative uye ndinoshanda. Ndiri kutsvakawo musikana wekuroora akavimbika anonamata Seventh Day Adventist. Vanoda kutamba neni ndapota musafona, nhare dzangu idzi 0779 075 147.****Ndiri murume ane makore 44 nevana 2 ndinoda mukadzi ane makore 28 kusvika 36. Ari pachokwadi ngaandibate pa0774 823 210.****Ndiri murume ane vana vatatu ndinotsvagawo mukadzi ane mwana kana asina uye asina chirwere. Ini handina chirwere ndine makore 35, ndinoda anosevenza. Nhamba dzangu 0774 813 792.****Ndiri mukadzi ane makore 37 nemwama mumwe chete uye ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 38 kusvika 48. Ini Ndiri HIV positive, ndinoda akavimbika. Ndibatei pa0773 296 001.****In ndiri mukomana ane makore 24, ndiri kutsvaga musikana ane makore 30 zvichidzika ari HIV negative. Ini ndiri negative chero ane mwana wake achigara muHarare ndinomuda. Nhare dzangu 0776 676 909.****Ndiri murume ane makore 48 uye ndiri kutsvagawo mudzimai wokuroora ane makore 30 kusvika 46. Nhare dzangu idzi 0773 059 108, ndinoita zvemigodhi . ****Ndine makore 33 uye ndinotsvagawo musikana ave kuda zvemba anogara muHarare asina mwana. Tumirai sms pa0775 543 556.****Ini ndiri murume ane makore 30, ndiri kutsvaga mudzimai wekuwana ane makore ari pasi pe26. Nhare dzangu dzinoti 0713 551 406.****Ndiri mudzimai ane makore 34 nemwana 1, ndiri kutsvagawo murume anoda kuroora ane makore 36 kusvika pa45. Ari pachokwadi. ngaandibate pa0737 940 160.****Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 35 uye ndiri kutsvagawo musikana anoda zvemba ane makore 23 kusvika 32. Nhare dzangu idzi 0715 348 748.****Ndiri mukadzi ane makore 38 uye ndinotsvagawo murume ane makore 40 zvichikwira ari pachokwadi nekuvaka musha. Anoda kunoongororwa ropa ngaafone panhamba idzi 0714 328 262 asi macall back handidi. Ndiri vhenda. ****Makadii veKwayedza? Ini ndakambonyorera asi pekutanga handina kuwana ari pachokwadi. Kepiri handina kushambadzwa mupepanhau. Ndiri mudzimai ane makore 36 nemwana 1 ndiri HIV positive. Ndinodawo murume ane mwana mumwe kana vaviri ari positive ane makore 36 kusvika 60. Ndingafare mukandishambadza, nhare dzangu dzinoti 0772 482 709.****Makadini veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 43 nevana vatatu, ndiri kutsvaka musikana anoda zvemusha ari pakati pemakore 18 kusvika 25. Fonai pa0772 638 310.****Makadiniko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 34, handina mwana uye ndinodawo murume anoda zvokuroora ane basa rakanaka ari musvinu seniwo achida kuongororwa ropa. Kunyanya ane mwana mumwe chete, matsotsi musazvinetsa henyu. Nhare dzangu 0738 976 119.****Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 36 uye ndinotsvagawo shamwari (penpals) dzakavimbika. Ndibatei pa0773 947 545.****Ndiri mukomana ane makore 24 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika aine muviri mudikiwo. Vanoda ndibatei pa0776 889 994 asi vanoda kutamba kwete.****Ndinotenda veKwayedza ndakazomuwana wangu wandinoda, ndiri kutochata munaApril saka vachiri kufona panhamba idzi 0772 596 088 chiregerai henyu. ****Ndiri murume ane makore 44 nevana 2, ndinoda mukadzi ane makore 28 Kusvika 36. Ari pachokwadi ngaandibate panhamba dzinoti: 0774 823 210.****Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32 nevana 2, ndiri negative uye ndinodawo mudzimai ane mwana kana asina anoda zvekuwanikwa ari pachokwadi nekuda imba. Kune vanoda ngavandifonere pa0777 109 947 asi kwete call back. Ndatenda. ****Kwaziwai veKwayedza. Ndini ndakawana munhu ane nhamba idzi 0737 528 922 saka vamwe vose ngavachirega kufona.****Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42 nevana vana uye ndinotsvagawo mudzimai ane makore ari pasi pe40 ari positive seni. Ndinoshanda avo vakazvipira kuroorwa fonai pa0773 627 041 asi musatambise nguva yangu.****Buritsaiwo tsamba yangu mubepanhau randinofarira zvikuru ndatenda hangu. Ndiri mukomana ane makore 18 uye ndiri kutsvagawo musikana akanaka ane makore 18 zvichidzika anotamba nemvura. Ndibatei pa0738 883 305. ****Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45 uye ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 40 zvichidzika anonamata Anglican. Anoda ngaandibate pa0713 839 420.****Ndiri mudzimai ane makore 41 nevana vana, ndinoshanda asi ndakaremara mutsaona. Ndinotsvaka murume ari pakati pemakore 45-55 asina mudzimai. Ndibatei pa0772 730 257.****Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vaviri, ndinotsvaka shamwari (penpals). Ndibatei pa0736 304 119. ****Ndiri murume ane makore 26, ndine mwana mumwe chete uye ndiri kutsvagawo mukadzi ane mwana wake. Ndinoshandira vanhu paruzevha, anoda ngaafone pa0772 537 806. ****Ini ndiri mukadzi ane makore 31 nemwana mumwe chete uye ndinorarama neutachiona. Ndinoda akangoitawo seni ane makore 35 kusvika pa45. Ndinogara muguta reHarare ndiri mutsvuku murefu ndasimba zvishoma uye ndinodaira mvura. Vari pachokwadi ngavandibate panhamba dzangu dzinoti: 0777 634 173.****
Ini ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana mumwe uye ndinoda murume ari pachokwadi. Nhamba dzangu dzinoti 0737 088 197.	Thursday, 28 February 2013 10:24	NDIRI murume ane makore 32 nemwana mumwe uye ndinoda mukadzi ane makore 30 zvichidzika ane zvaanoita muupenyu asina hutsvina. Ini ndinoshanda nhamba dzangu 0738 899 406.
Ndinoda anogeza, anoshanda anoda zvemba asi vane vakadzi kwete. Nhare dzangu idzi 0773 971 626.	Thursday, 14 February 2013 09:50	NDAKAMBONYORERA ndichitsvaka murume ndichishandisa nhamba idzi 0737 665 201, vanhu vangachirega kufona nekuti ndakamuwana aidiwa nemwoyo wangu.
Vose vaifona pa0773 522 254 ngavachirega havo, ndakamuwana chaiye wandaida. Ndinotenda.	Thursday, 31 January 2013 09:55	MAKADINI veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana vaviri, ndiri positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 38 kusvika 45 ndakambonyorera asi handisati ndamuwana ari
Ndinotsvagawo musikana wokuroora	Thursday, 24 January 2013 10:46	MAKADII veKwayedza? Ndakambonyorera, ndiri mukadzi ane makore 37 uye ndinoda murume ane makore ari pakati pe38 ne45 anoda zvekuchata anogeza, akanaka akasimba zviri pakati nepakati.
Ndinodawo murume ari pachokwadi anotya Mwari	Thursday, 20 December 2012 14:16	VAIFONA pa0778 560 781 chiregerai henyu ndakatoroora, ndinotenda veKwayedza.***Ndinokutendai zvikuru veTishamwaridzane ndakamuwana mukadzi wandaida chaiye saka vamwe ngavachirega kufona pa0738 052 996. Pamberi nechirongwa chenyu! *** Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 30 nevana vaviri uye ndinoda shamwarirume ine makore 35 kusvika 45. Zvakawanda tozotaura, call me back kwete nhare dzangu idzi 0738 313 261.*** Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvakavo musikana ane makore 22 kusvika 29 akavimbika anoda zvemba.
« Start Prev 1 2 3 4 5 Next End »	Page 1 of 5	Search	Sponsored Links